XOG:- Xildhibaanada qaar oo loo diiday shahaadooyinka iyo arrinkaasi oo buuq badan ka dhashay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Xildhibaanada qaar oo loo diiday shahaadooyinka iyo arrinkaasi oo buuq badan ka dhashay
Guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa la sheegayaa inuu u diiday shahaadada aqoonsiga qaar ka mid ah xildhibaanadii dhawaan lasoo doortay, kuwaas oo ay muran ka taagan tahay qaabkii lagu soo doortay.
Warqad qoraal ah oo kasoo baxday guddiga doorashooyinka ayaa lagu sheegay in guddigu uu bilaabay bixinta shahaadada xildhibaanada la doortay, iyadoo la siinayo oo kaliya xildhibaanada aanay wax dacwad ah ka oolin islamarkaana aan la isku heysan kuraastooda.
Xildhibaanada loo diiday in la siiyo shahaadooyinka ayaa la sheegayaa in dacwad ay ka taagan tahay qaabkii lagu soo doortay, waxayna arrintaas keenay in buuq badan uu ka dhasho.
Wel-welka ugu badan oo arrintaan laga qabo ayaa ah in guddigu uu arrintaan u adeegsado musuq-maasuq iyo in xildhibaano la doortay lagu adkeeyo shahaadada, si dhaqaale badan looga qaato.
Tirada xildhibaan oo la sheegayo in loo diiday shahaadooyinka ayaa gaaraya ilaa 23 xildhibaan oo ay guddiga sheegeen in qaabkii lagu soo doortay aanay sax ahayn, waxaana arrintaan weli faragelin baahsan ku haaya madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka, kuwaas oo doonaya in xildhibaanadaasi shahaadooyinkoodi la siiyo.